June 4, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
သမီး နေမကောင်းဘူးလား” မေးရင်းနဖူးပေါ် လက်လာတင်ပါတယ် ကျမ ရမ္မက်ပြင်းထန်ချိန်မှာ ယောင်္ကျားတစ်ဦးရဲ.အထိ အတွေ.ကြောင့်ဆက်ကနဲ တုန်သွားမိတယ် ကျမခေါင်းအသာခါပြမိတယ် ။ အဲဒီချိန်မှာသူက ကျမခါးကို ဆက်ကနဲပွေ.ရင်း ကျမနုတ်ခမ်းတွေကို ဖွင့်ချလိုက်တဲ့ ရမ္မက်နဲ. အားရပါးရ စုတ်ယူပါတော့တယ်…ကျမကတော့ရုန်းတာပေါ့ …သူရင်ဘတ်ကို သူမျက်နှာကို ဘယ်ညာရမ်းတာပေါ့ …ဒါပေမယ့် ကျမရဲ.တောက်လောင်နေတဲ့ရမ္မက်မီးတွေဟာ ကြာရှည်ငြင်းဆန်ခွင့်မပြုပါဘူး …သူလက်ထဲမှာပျော့ခွေသွားရပါတယ် ….။။။ သူဟာကျမ နုတ်ခမ်းသားတွေကို လျက်နေသလို သူ.လက်တွေကလဲ ကျမ ထဘီ ကို အသာချွတ်ချလိုက်ပါတယ် ။လေပြေနုရဲ.အတွေ.ကို ပေါင်တံ တွေကတစ်ဆင့်ခံစားလိုက်ရပါတယ် ကျမရဲ. ပစ္စည်း Read more
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်က ဦးသာလှမိန်းမ မအုံးရှင် သားအိမ်ကင်ဆာရောဂါ နှင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။မအုံးရှင် မကွယ်လွန်ခင်ကပင် ဦးသာလှတို့နှင့်တဆက်တည်း ရှိနေသော မြေကွက်ကိုဝယ်ယူ၍ ၂ ခန်း ၃ ခန်း မြေစိုက်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပေးကာ မရင်မေ ကိုနေထိုင်စေသည်။ခြံက ပေတစ်ရာပတ်လည်ကျယ်ဝန်းသဖြင့် ထိုခြံထဲတွင် သနပ်ခါးပင်များ စိုက်ပျိုးထား၏။မရင်မေက စိုက်ပျိုးရေးဝါသနာပါသည်။ ဆယ်တန်း အောင်ပြီးလည်းဖြစ်၏။မေထုန်နို့စားနွားမ သုံးကောင်လည်းရှိသည်။ထို့ကြောင့် သူတို့ တူဝရီးမှာ ဤရွာတွင် စီးပွားရေးချောင်လည်သူများဖြစ်ကြ၏။အမျှော်အမြင် ရှိသူများ ဖြစ်ကြ၍ အဝီစိတွင်းတူးကာ စိုက်ပျိုးရေးကို တိုးချဲ့ ကာလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အနှစ် ၂၀ ကျော်ကြာပြီဖြစ်၍ Read more
ညနေ လေးနာရီ ခွဲ ကျော်ကျော် အချိန် ။ “ ယူ ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ ၏ ပိုင်ရှင် နှင့် မန်းနေးဂျင်း ဒါရိုက်တာ ဖြစ်သူ ခင်မေယုသည် အတွင်းရေးမှူးးအမျိုးသမီး စန်းစန်းမော် ကွန်ပြူတာ ပရင်တာ ဖြင့် လှပသေသပ်စွာ ရိုက်နှိပ တင်ပေးထားသော ကုန်အမှာလွှာကို လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း မပြုမှီ နောက်ဆုံး စိစစ်သည့်အနေဖြင့် ပြန်ဖတ်ကြည့်နေသည် ။ အောင်မြင်တိုးတက်နေသော ကုမ္ပဏီ တခုကို ဦးစီးရှေ့ဆောင်ကာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ စီးပွားရေး လုပ်ကိုင်နေသော်လည်း Read more
ဆရာမ နာမည်က ကြည်ပြာ..ကျတော့တို့ရွာကို လာပြီး မူလတန်းကိုလာရောက်စာသင်ပေးသော..ရပ်ရွာခန့်..ဆရာမ.တစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်။ကျတော့အိမ်ခေါင်းရင်းအိမ်မှာ နေထိုင်ရန် ရပ်ရွာက သတ်မှတ်ထားပါသည်။ဆရာမကြည်ပြာက. အသားကဖြူဖြူ…အရပ်ကနဲနဲပုတယ်…ရယ်လိုက်ရင် ပါးချိုင့်လေးခွက်ပြီး ..သွားလေးတွေက ဖြူဖွေးနေတာပဲ…ဆရာမဝတ်စုံလေးဝတ်လိုက်ရင်..အရမ်းကို ကျက်သရေရှိ လှပတဲ့သူပါ…လှမ်းလျှောက်ရင်လည်း..ညင်ညင်သာသာလေး လှမ်းလျှောက်တက်ပြီး…ဘေးတိုက်တုန်ခါတဲ့..တင်သားများမဟုတ်ဘဲ…အပေါ်အောက်..လှုပ်ခါနေတဲ့ တင်သားများကို ပိုင်ဆိုင်သူလည်းဖြစ်ပါသည်။ သူနဲ့အရမ်းမရင်းနှီးပေမယ့်လည်း…ကျတော့အတွက်မှန်းထုစရာ..စိတ်ကူးရင် မင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ပါသည်။.မှန်းထုစရာ အကြောင်းအရာတွေကလည်းရှိတယ်လေ…မိုးလင်းလို့ သေးပေါက်ရင် အိမ်သာပေါ်မတက်ပဲ…အိမ်သာရှေ့မှာ..ထမိန်လှန်သေးပေါက်ခြင်း၊ရေချိုးရင် သူနေတဲ့အိမ်ခြေရင်းမှာ ချိုးတက်ခြင်း၊ဗွီဒီယိုကြည့်ပြီးပြန်လာရင် ရေချိုးတဲ့နေရာလေးမှာပဲ…ထမီလှန် ဓာတ်မီးထိုးသေးပေါက်ခြင်းတို့ဟာ..ကျတော့အတွက် ဆရာမကိုမှန်း…. ဂွင်းထုခြင်းကိုဖြစ်စေခဲ့တာပေါ့…..အဲဒီအထဲကမှ..ကျတော်…ဂွင်းထုအရသာအရှိဆုံးက..မနက်ရေချိုးချိန်နှင့်ညနေရေချိုးချိန်ပဲ…ဆရာမကြည်ပြာ ရေတခါချိုးလျှင်အချိန်တော်တော်ကြာတယ်..နှံစပ်အောင်လည်းတစ်ကိုယ်လုံးပွတ် ချေးတွန်းတယ်….ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးတဲ့နေရာက ကျတော့အခန်းရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်…သူနေတဲ့အိမ်ရဲ့ခြေရင်းဘက်ကျတာပေါ့….တောရွာတွေဆိုတော့..ရေချိုးခန်းအကာတွေ..ဘာတွေ..မရှိဘူး..ရာဝင်အိုးနှင့်အဝတ်လျှော်စရာသစ်သားတစ်တုံးပဲရှိတယ်..ကျတော်ကဆင်းရဲတော့ ..ဝါးထရံကာအိမ်လေးနဲ့ပဲနေနိုင်ပါတယ်…ချောင်းကြည့်ဖို့အတွက် အဆင်တော့ပြေတယ်… ဆရာမကြည်ပြာရေချိုးမယ်..မြင်လိုက်တာနဲ့..ကျတော်အခန်းထဲပြေးဝင်တော့တာပဲ… ဆရာမရေချိုးရင်ထမီအပိုတထည်ကိုဘယ်ဘက်လက်ဖျံပေါ်တင်..ညာလက်ကဆပ်ပြာခြင်းကိုကိုင်ပြီး..ရေချိုးတဲ့နေရာကိုလာတယ်ဒီနေ့ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတော့..ရေချိုးတာနည်းနည်းနောက်ကျတယ်ကဗျာကသီအိမ်ခန်းထဲပြေးဝင်လိုက်ပြီး..ချောင်းနေကျအပေါက်မှာနေရာယူလိုက်တယ်ဆရာမကလည်း….ရာဝင်အိုးနားရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ..ထမီကိုတန်းမှာတင်..ဆပ်ပြာခွက်.အောက်ချပြီး…ရေလေးငါးခွက်ခေါင်းပေါ်ကနေဆက်တိုက်လောင်းချလိုက်တယ်..လျောကျနေတဲ့ထမီကို ပြန်ပြင်ဝတ်ပြီး နောက်ထပ်ရေလောင်းလိုက်တယ်. .ပြီးတော့..မျက်နှာသစ်ဆေးရည်နဲ့မျက်နှာကိုပွတ်ပြီးမှသွားပွတ်တံပေါ်သွားတိုက်ဆေးကိုကုန်းပြီးညစ်နေတာလုပ်လိုက်တော့ တင်းပြီးကားထွက်နေတဲ့တင်ပါးကြီးကိုမြင်လိုက်တော့. Read more
“စွတ် ဇွပ် ဖွတ် ဖွပ် ” ဟူသော ယောက်ျားနှင့်မိန်းမ တဏှာလွန်ကျူးဆက်ဆံရာမှ ထွက်ပေါ်လာသော အသံဗလံများနှင့်အတူ မင်းသားနှင့်မင်းသမီးတို့၏ အချစ်ကြမ်းကြမ်း ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခုနှင့် စဖွင့်လေသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ခြင်ထောင်ခန်း (ဝါ) ကုတင်ခန်းလို့ ဆိုနိုင်သည်။ မင်းသားက အသက်လေးဆယ် မင်းသမီးချောလေးက အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့် ဖြစ်ပြီး တစ်ယောက်က သန်သန်မာမာထွားထွားကျိုင်းကျိုင်း စိတ်ကြမ်းလူကြမ်း ယောက်ျားအရင့်အမာကြီး တစ်ယောက် ဖြစ်သလို မင်းသမီးလုပ်သူကလည်း ပီဘိ မိန်းမသားစင်စစ် … ဖော့ဖယောင်းကဲ့သို့ ပျော့ပျော့ပြောင်းပြောင်း နွဲ့နွဲ့နှောင်းနှောင်းနှင့် အလွန်တရာသိမ်မွေ့နူးညံ့လျက် ကြွေအဆင်းလို ရုပ်ရည်ရူပကာ Read more
ကျယ်ဝန်းသောခြံကြီးတစ်ခုအတွင်းမှလှပသောတိုက်လေးတစ်လုံး၏ရှေ့မှမြက်ခင်းပေါ်ရှိခုံ တန်းလေးပေါ်တွင်စာထိုင်ဖတ်နေသောကောင်မလေးမှာစိုးမိုးခိုင်ဟူသောဆယ်ကျော်သက်အရွယ်အပျိုမလေးတစ်ဦးပင်ဖြစ်လေသည်၊သူမ၏ဖခင်သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လေသည်၊အသက်အရွယ်အားဖြင့်(၁၈)နှစ်အတွင်းသို့ဝင်ကာစသာရှိသေးသော်လည်းကိုယ်လုံးပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုးနှင့်အလှတွင်ပြိုင်ဖက်ကင်းသူတစ်ဦးဖြစ်နေလေပြီ၊ဖြူဝင်းသောအသားအရေ။မို့မို့အိအိရင်သားကလေးများ။သေးကျဉ်သောခါးနှင့်ကားစွင့်နေသောတင်ပါးများ။ဆင်နှာမောင်းကဲ့သို့သွယ်ဆင်းနေသောပေါင်တန်များဖြင့်သူမ၏ဖွံ့ဖြိုးစအလှကိုတန်ဆာဆင်ထားလေသည်၊မျက်တောင်ကော့လေးများအောက်မှမျက်နက်ဝန်းတစ်စုံမှာတောက်ပပြီးအရည်ကြည်လဲ့နေကြသလိုဖြောင့်စင်းသောနှာတံလေးအောက်မှနှင်းဆီဖူးနှုတ်ခမ်းလေးနှစ်လွှာမှာဆေးမဆိုးရဘဲနီရဲစိုစွတ်နေလေသည်၊ယနေ့တွင်အစ်မဖြစ်သူနှင့်မိခင်တို့သည်ဗိုလ်ချုပ်ဈေးသို့ထွက်သွားကြပြီးဖခင်ကလည်းအလုပ်သွားနေသောကြောင့်သူမနှင့်အတူအိမ်ဖော်မလေးသာကျန်ခဲ့ကာတစ်ခြံလုံးတိတ်ဆိတ်နေလေသည်၊သူမ သည်စာအုပ်ကိုဖတ်နေရင်းအိပ်ချင်လာလေသည်၊ “မပုရေ စိုးကိုသံပုရာရည်တစ်ခွက်လောက်ယူခဲ့ပေးပါ” အချိန်အတော်ကြာသော်လည်းမပုကပေါ်မလာချေ၊ထို့ကြောင့်စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုင်နေရာမှထ ကာမီးဖိုချောင်သို့ထွက်လာလေသည်၊မီးဖိုချောင်ထဲတွင်လည်းမပုကိုမတွေ့ရသောကြောင့်အလုပ်သမားတန်းလျားဖက်သို့ထွက်လာလေသည်၊မပု၏အခန်းရှေ့တွင်ယောက်ျားဖိနပ်တစ်ရံနှင့်မပု၏ ဖိနပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်သူမ၏စိတ်ထဲမှစဉ်းစားလိုက်မိသည်၊ “အင်း ။ မပုမှာယောက်ျားမရှိဘူး ။ သူ့ဧည့်သည်လားမသိဘူး” စိုးမိုးခိုင်သည်တန်းလျားနားသို့တဖြည်းဖြည်းကပ်သွားရင်းလှေခါးနားရောက်သောအခါအိမ် ထဲမှအသံများကိုကြားလိုက်ရလေသည်၊ငယ်ရွယ်သူပီပီစပ်စုလိုသောကြောင့်ထရံအပေါက်မှအသာ ချောင်းကြည့်လိုက်လေသည်၊ အခန်းထဲတွင်မပုနှင့်ခြံစောင့်ကိုအေးတို့ကိုမြင်လိုက်ရသည်၊ကိုအေး ကအပေါ်ပိုင်းတွင်အ၀တ်မရှိဘဲပုဆိုးကိုကွင်းသိုင်းထားကာမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားတွင်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေလေသည်၊မပု၏အ၀တ်များသည်လည်းဘေးတွင်ပုံကျနေကာတစ်ကိုယ်လုံးဗလာဖြစ်နေလေသည်၊ကိုအေးသည်မပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းကိုအသာဆွဲဖြဲလိုက်ပြီးသူမ၏နို့အုံများကိုလက်ဖြင့်ဆုပ်နယ်နေလေသည်၊မပုကကိုအေး၏လီးကြီးကိုလက်ဖြင့်ကိုင်ှုသူမ၏စောက်ဖုတ်အ၀တွင် တေ့ပေးလိုက်သည်၊ “ဖြည်းဖြည်းလုပ်နော်ကိုအေး” “အေးပါကွာ” စိုးမိုးခိုင်သည်ထိုမြင်ကွင်းကိုအသည်းတယားယား။ရင်တဖိုဖိုနှင့်ကြည့်နေမိလေသည်၊ အသက်အရွယ်ကအသိဥာဏ်ပေးသော်လည်းမျက်မြင်တွေ့ရခြင်းသည်ပထမအကြိမ်ဖြစ်လေသည်၊အိမ်ကလေးသည်တစ်ချက်။နှစ်ချက်မဋသိမ့်ကနဲတုန်သွားသည်၊ကိုအေးကသူ၏တင်ပါးကိုရှေ့သို့တွန်းလိုက်သောကြောင့်ဖြစ်လေသည်၊ထို့နောက်ကိုအေးသည်မပု၏နို့ကိုဆုပ်နယ်နေသောသူ၏လက်များဖြင့်မပု၏ခါးကိုကိုင်လိုက်ပြီးဆွဲယူလိုက်ရာမပုသည်ကော့ပျှုံပါလာလေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်မျက်လုံးလေးပြူှးုကြည့်နေရင်းတံတွေးကိုအသံမထွက်အောင်မျိုချလိုက်မိသည်၊ ကိုအေးသည်ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရာမှဒူးထောက်လိုက်သောအခါမပု၏ခါးနှင့်ကျောပြင်သည်ကုတင်ပေါ်သို့ပြန်ကျသွားလေသည်၊ထို့နောက်ကိုအေးကမပု၏ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုပေါ်သို့တွန်းတင်လိုက်ရာမပု၏တင်ပါးများသည်အပေါ်သို့မြောက်တက်သွားကာအိပ်ယာနှင့်လွတ်နေလေသည်၊ထို့နောက်ကိုအေးကမပု၏ပေါင်နှစ်ချောင်းအောက်မှလက်လဋှိုသူမ၏ပုခုံးနှစ်ဖက်ကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်၊ကိုအေးကသူ၏လီးကြီးကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲထုတ်လိုက်။ထိုးသွင်းလိုက်လုပ်နေလေသည်၊စိုးမိုးခိုင်သည်မပု၏လှုပ်ရှားမှုများကိုအသေအချာကြည့်လိုက်မိသောအခါမျက်စိများကိုမှိတ်ထားလျက်ကိုအေးကလီးကြီးကိုထိုးသွင်းလိုက်တိုင်းတင်ပါးများကိုကော့ကော့ပေးသည်ကိုသတိထားလိုက်မိလေသည်၊ထိုသို့တဖြည်းဖြည်းအထုတ်အသွင်းလုပ်နေရာမှကိုအေးကနှစ်ချက်သုံးချက်ခပ်မြန်မြန် ဆောင့်လိုက်လေသည်၊ ထိုအခါတွင်အိမ်လေးသည်သိမ့်ကနဲလှုပ်သွားလေသည်၊ထို့အပြင်မပု၏ တဟင့်ဟင့်ညည်းတွားသံနှင့်အတူဖတ်ဖတ်ဟူသောအသံကိုပါကြားလိုက်ရလေသည်၊ “မပု ။ ကိုအေးလိုးတာကောင်းရဲ့လားဟင်” “အို သိပ်ကောင်းတာပေါ့တော် ။ နာနာလေးလိုးစမ်းပါကိုအေးရယ် ။ ခံလို့ကိုမ၀နိုင်ဘူး” ထိုအခါကိုအေးသည်အသားကုန်လိုးလေတော့သည်၊ချောင်းကြည့်နေသောစိုးမိုးခိုင်မှာ လည်းရာဂစိတ်များတဖြည်းဖြည်းထကြွလာလေသည်၊စောက်ဖုတ်အတွင်းမှစောက်ရည်ကြည်များစိမ့်ထွက်နေသောကြောင့်စောက်ဖုတ်အပေါ်ရှိထဘီမှာစိုစိစိဖြစ်နေလေသည်၊သူမ၏လက်ကလည်းစောက်ဖုတ်ပေါ်သို့အုပ်ကိုင်လျက်ပွတ်သပ်နေမိလေသည်၊ထိုစဉ်တစ်ဖက်ခြံမှစိုးမိုးခိုင်၏အစ်မ၏ရည်းစားဖြစ်သောဇော်ထွန်းသည်စိုးမိုးခိုင်၏အစ်မရှိသည်ဟုထင်ှုသူမတို့၏ခြံတွင်းသို့မလွယ် ပေါက်မှတဆင့်ဝင်လာလေသည်၊ ထိုအခါနောက်ဖေးတန်းလျားအနီးတွင်စိုးမိုးခိုင်ဘာကိုသဲသဲမဲမဲ Read more
အဲဒီနေ့ကကျမချောင်းကြည့်တာကိုကောင်လေးရိပ်မိသွားတယ်ထင်တယ်…သူကလဲရေချိုးခန်းတံခါးကိုမပိတ်တာအကြံနဲ့ထင်ပါရဲ့..ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ထောင်မတ်နေတဲ့သူ့ဟာကြီးးကိုမြင်လိုက်ရပြီး..သူ့မျက်နှာလဲမကြည့်ရဲတော့တာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လိုက်တယ် အိမ်ရောက်တော့လဲ အဲဒီကောင်လေးဂွင်းထုနေတာကိုဘဲမြင်ယောင်နေပြီး. .ကျမအဖုတ်ထဲကအရည်တွေကလဲစိမ့်ထွက်နေတာနောက်ဆုံးမထိန်းနိုင်တော့တာနဲ့ မီးဖိုခန်းထဲဝင်ပြီး…သူများတွေပြောသံကြားဘူးတဲ့အတိုင်း ခရမ်းသီးတစ်လုံးကိုရေဆေးပြီးအိပ်ခန်းထဲယူလာပြီး ကျမအဖုတ်ကွဲကြောင်းလေးအတိုင်းပွတ်လိုက်အစိလေးကိုထိုးလိုက်လုပ်နေပါတော့တယ်.. .အိုအရမ်းကောင်းလိုက်တာပါလား..ကောင်လေးရဲ့ဟာကြီးနဲ့သာဆိုရင်လို့တွေးရင်းအဖုတ်ထဲကိုထိုးသွင်းလိုက်ဆွဲထုတ်လိုက်လုပ်နေမိပါတော့တယ်…အိုး…ကောင်းလွန်းလို့ကျမပါးစပ်က တစ်ဟင်းဟင်း…..နဲ့ညည်းညူနေမိပါတယ်…ခရမ်းသီးနဲ့လုပ်ကြည့်တာအရမ်းကိုကောင်းလွန်းလှပါတယ်ရှင်…ဟိုကောင်လေးရဲ့လိင်တံကြီးနဲ့သာ အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းလိုက်ရရင်..ကျမစဉ်းစားရင်းအရမ်းကိုခံချင်စိတ်တွေဖြစ်နေပါပြီ…. .ပက်လက်လှန်ပြီးလုပ်ရတာအားမရတာနဲ့ကုတင်အောက်ကိုဆင်း.ကုတင်ပေါ်ကိုခြေထောက်တစ်ချောင်းကိုတင်လိုက်ပြီး ရှုပ်လွန်းလှတဲ့ထမိန်ကိုပါကွင်းလုံးချွတ်ပစ်လိုက်ပြီး ဘယ်လက်ကအဖုတ်ကိုဖြဲပြီးကျမရဲ့အစိရှည်ရှည်ကြီးကိုကလိရင်းညာလက်နဲက ခရမ်းသီးကြီးကိုကိုင်ပြီးအဖုတ်ထဲကိုပယ်ပယ်နယ်နယ်ထိုးဆွနေလိုက်ပါတော့တယ်.. ခရမ်းသီးကြီးကိုစွပ်ကနဲထိုိးထည့်လိုက်ပြွတ်ကနဲအသံထွက်အောင်ဆွဲထုတ်လိုက်အားကနဲကြိတ်ပြီးအော်လိုက်နဲ့လုပ်ကောင်းကောင်းစိတ်ရှိလက်ရှိကိုလုပ်နေလိုက်တာ.တဏှာစိတ်တွေများလွန်းတော့တံခါးကိုတောင်ဂျက်ချဖို့ကုိုတောင်မေ့သွားလို့ကျမတို့မိသားစုဆရာဝန်ဦးမောင်မောင်ဇော်နောက်ဖက်ကိုရောက်နေတာမသိလိုက်မိတော့ပါဘူး…..“သမီး..ဒါထက်ပိုကောင်းအောင်ဦးဇော်လုပ်ပေးမယ်”ပြောပြောဆိုနဲ့ဦးဇော်ကကျမကိုဆွဲလှည့်ပြီးကုတင်ပေါ်ကိုပက်လက်လှန်လှဲလိုက်ပါတယ်…ကျမဟာအဖုတ်ထဲမှာခရမ်းသီးကြီးတန်းလန်းနဲ့ရှက်စိတ်ကြောက်စိတ်နဲ့ကြက်သေသေဖြစ်နေတုန်းဦးဇော်ဟာသူ့လုံချည်ကိုချွတ်ချလိုက်ပြီးအတွင်းခံဘောင်းဘီကိုပါချွတ်လိုက်ပါတော့တယ်….ဦးဇော်ရဲ့လိင်တံကြီးဟာမြွေဟောက်ကြီးတစ်ကောင်လိုငေါက်ကနဲထိုးထောင်ပြီးထွက်လာပါတော့တယ်… အလိုလေး…နဲနဲနောနောလိင်တံကြီးလားရှင်….အရှည်ကြီးဘဲ…တုတ်ခိုင်ပြီးသန်မာလိုက်တာကလဲထောင်မတ်နေတာဘဲ…အသားဖြူပြီးထိပ်ဖူးကြီးကလဲ။ဖူးတင်းပြီးကားထွက်နေတာဘဲ…ဦးဇော်ဟာကျမအဖုတ်ထဲကခရမ်းသီးကြီးကိုကျမအဖုတ်ထဲကိုဆောင့်ဆောင့်သွင်းလိုက်နြှဲ့လိုက်ဆောင့်လိုက်လုပ်ပေးရင်းသူလိင်တံကြီးကိုကိုင်ခိုင်းလိုက်ပါတယ်…ကျမလဲမရဲတစ်ရဲနဲ့ဦးဇော်ရဲ့လိင်ချောင်းကြီးကိုဆုပ်ကိုင်လိုက်မိပါတော့တယ်…“ အိုး..ဦးဇော်ဟာကြီးက..မာတောင်နေတာဘဲ..လက်နဲ့တောင်မဆန့်ဘူး…” “သမီး…ဟိုဟာဒီဟာအဲလိုမျိုးမခေါ်နဲ့လေ..သူ့နံမယ်အတိုင်းဘဲခေါ်တာပိုပြီးအရသာကောင်းတယ်…ဘာမှရှက်စရာ.ကြောက်စရာ..အားနာစရာမရှိဘူးနော်…လိုချင်တာပြော..လုပ်ချင်တာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြီး..လုပ်ကြတာပိုကောင်းတယ်” “ဟုတ်..ဟုတ်ကဲ့ပါဦးဇော်. .ဦးဇော်ရဲ့ ဟို…လီးကြီးကအရမ်းကိုင်လို့ကောင်းလိုက်တာ…ခရမ်းသီးနဲ့ဆောင့်လိုးပေးတာလဲသိပ်ကောင်းတာဘဲ..” “ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးနဲ့အလိုးခံလိုက်ရင်ပိုကောင်းသွားမှာ.. .”“အမလေး…ဦးဇော်ရဲ့လီးကဒါလောက်ကြီးပြီးရှည်တာသမီးစောက်ဖုတ်ကွဲထွက်သွားမှာပေါ့… သမီးဦးဇော်လီးကြီးကိုကြောက်တယ်… အလိုးမခံရဲဘူး….ဦးဇော်ကိုသမီးလက်နဲ့လုပ်ပေးမယ်လာ..”ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုကိုင်ပေးနေရာကဆိုင်ကေ ဂ်ါရခါးလေးဂွင်းတိုက်နေတာကိုသွားသတီရလိုက်ပြီး. .ဦးဇော်ကိုအဲဒီလိုမျိုးအားရပါးရဂွင်းထုပေးချင်စိတ်ဖြစ်လာပါတော့တယ် ကျမဟာကုတင်ပေါ်ကဆင်းလိုက်ပြီး…ဦးဇော်ရဲ့ရှေ့မှာဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ပါတယ် ..ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးဟာကျမမျက်နှာကုိုပွတ်တိုက်မိသွားတယ်… အမလေးမာတောင်နေတဲ့လီးနဲ့မျက်နှာကိုထိုးမိတာတောင်တော်တော်ကောင်းနေပါလား.. .စောက်ဖုတ်ထဲအလိုးခံကြည့်ရရင်ကောင်းမယ်..ဘာဖြစ်ဖြစ်အလိုးခံကြည့်တာကောင်းမယ်.. ..ခုတော့ဂွင်းထုပေးလိုက်အုံးမယ်..ပြီးမှဘဲလိုးခိုင်းတော့မယ်..သူလဲကျမကိုလိုးချင်နေမှန်းကျမသိနေတယ်လေ….ကျမဟာရင်တွေတစ်ဒိုင်းဒိုင်းခုန်နေပြီးအာခေါင်တွေလဲခြောက်နေပါပြီ….ဒူးတွေလဲတုန်နေပါပြီ…ကျမဟာတုန်ရီနေတဲ့ဘယ်လက်နဲ့ဦးဇော်ရဲ့ပေါင်ကိုကိုင်ပြီးညာလက်နဲ့ဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုိဆုပ်ကိုင်လိုက်ပါတယ်..အိုးလီးကြီးကကျမလက်ညိုးလက်မမထိမိအောင်ကြီးလိုက်တာ..သန်မာပြီးတုတ်ခိုင်လိုက်တဲ့လီးကြီးပါလား..ကိုင်ရတာလဲအားရလိုက်တာ..ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးကြီးကိုညှစ်လိုက်ပြီး.ဂွင်းစထုပေးနေပါပြီ….ထိပ်ဖူးကြီးကနေလီးအရင်းထိဖြေးဖြေးချင်းဆွဲချလိုက်အပေါ်ကိုပြန်ဆွဲလိုက်နဲ့မှန်မှန်လေးတိုက်ပေးနေရင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်မြန်လာပြီးအသံတွေထွက်တဲ့အထိအားရပါးရကြီးကိုထုပေးနေမိပါတယ်..ဦးဇော်ဟာလဲကျမထုပေးနေတာကောင်းလွန်းလို့ကော့ကော့ပေးရင်းတစ်ဟင်းဟင်းညည်းညူနေပါတော့တယ်.. အိုးယောက်ကျားတစ်ယောက်ဟာကိုယ်ဂွင်းထုပေးတာကိုအရသာတွေ့နေတာကိုကြည့်ရတာကိုကအသဲထဲကကျေနပ်နေမိပါတယ်ကျမဟာဦးဇော်ရဲ့လီးထိပ်ကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့အုပ်ကိုင်ပြီးပွတ်ပေးလိုက်…ညှစ်ဆွဲလိုက်လီးရင်းကိုညှစ်ပြီးဝိုင်းလိုက်နယ်လိုက်လုပ်ချင်သလိုလုပ်ပေးနေတော့ဦးဇော်လဲမခံနိုင်အောင်ဖြစ်လာပြီး“အား..အား..ကောင်းလိုက်တာသမီးရယ်…ပြီးချင်သလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ…ခဏလေး..သမီး.ခဏလေးပါ”ီဦးဇော်ဟာကျမကိုခဏရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီးကျမအကီင်္ျကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပါတယ်…အတွင်းခံဘော်လီကိုချွတ်ဖို့ဂျိတ်ကိုကုန်းဖြုတ်လိုက်တော့သူ.လီးကြီးဟာကျမပါးစပ်နှတ်ခမ်းတွေကိုပွတ်ဆွဲသွားပြီးပါးစပ်ကိုလီးနဲ့ထိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားတယ်. အမလေး..အသဲတွေယားသွားတာပါဘဲရှင်…ဒါပေမဲ့နှတ်ခမ်းတွေကိုလီးနဲ့ထိလိုက်ရတာလဲအရသာတစ်မျိုးကောင်းသလိုပါဘဲလားသူ့လီးကြီးကိုစုတ်လိုက်ချင်စိတ်တောင်ဖြစ်လာပြီ….အိုး ဦးဇော်ရဲ့လီးမွှေးတွေကလဲမျက်နှာကိုပွတ်ပေးနေသလိုပါဘဲလား ဦးဇော်ကျမရဲ့အတွင်းခံဘော်လီကိုဆွဲချွတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ ကျမဟာကိုယ်တုံးလုံးကျွတ်နဲ့ယောက်ကျားတစ်ယောက်ရဲ့တောင်မတ်ပြီးသန်မာလှတဲ့ လီးကြီးကိုမျက်နှာရှေ့မှာထားပြီးဆောင့်ကြောင့်ထိုင်နေရတဲ့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုတွေးမိပြီးရယ်ချင်လာပါတော့တယ်.. ဦးဇော်ဟာကျမကိုပခုံးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်ပြီးမတ်တတ်ဆွဲထလိုက်ပါတယ်.. …ပြီးတော့ကျမနှတ်ခမ်းတွေကိုသူ့နှတ်ခမ်းကြီးနဲ့စုပ်ရင်းကျမရဲ့နို့သီးတွေကိုဆုပ်နယ်ပေးနေတော့တယ်..အို..အင်း..အင်း…ကျမဟာကောင်းလွန်းလို့အသံထွက်အောင်ညည်းညူမိနေပါတော့တယ်.. Read more
ပွညျသူခဈြသရုပျဆောငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ ခိုငျသငျးကွညျကတော့ အနုပညာလောကမှာ ပရိသတျအားပေးမူကိုအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ ထိပျတနျးမငျးသမီးတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူ့မရဲ့သရုပျဆောငျမူတှကေတော့ ပရိသတျတှအေကွိုကျနဲ့ထပျတူကခြဲ့ပွီး အကောငျးဆုံးအကယျဒမီဆုတှကေိုလညျးထိုကျတနျစှာနဲ့ ပိုငျဆိုငျရရှိထားသူတဈယောကျပါ။ အောငျမွငျနတေဲ့ အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈပမေယျ့ အလှူအတနျးလုပျတဲ့နရောမှာလညျး လှဈဟာမှုမရှိအောငျ သဒ်ဒါတရားထကျသနျသူတဈယောကျဖွဈပွီး လတျတလောဖွဈပှားနတေဲ့ Covid-19 ရောဂါနဲ့ပတျသကျပွီးတော့လညျး တတျနိုငျတဲ့ဘကျကနေ ပါဝငျကူညီဆောငျရှကျပေးနတောဖွဈပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး ပုပ်ပါးမှာဘုရားဖူးတှမေလာလို့ အဆာမရှိရှာတဲ့မြောကျကလေးတှအေတှကျ တတျနိုငျသလောကျလေးလှူဒါနျးခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။ အဆိုပါအလှူအကွောငျးကိုတော့ ခိုငျသငျးကွညျက သူမရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ ဖျောပွထားခဲ့ပါတယျ။ ပရိသတျကွီးရေ ခိုငျသငျးကွညျတို့ မိသားစုရဲ့အလှူအတှကျ သာဓုချေါခဲ့ကွပါဦးနျော..။ Source:khine thin kyi Zawgyi ပုပ္ပါးမှာဘုရားဖူးတွေမလာလို့ အဆာမရှိရှာတဲ့မျောက်ကလေးတွေအတွက် လှူဒါန်းပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်သင်းကြည်တို့မိသားစု ပြည်သူချစ်သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Read more
ဖခငျဖွဈသူရဲ့မှေးနအေ့လှူအဖွဈ အရှငျဆကေိန်ဒရဲ့ကြောငျးတိုကျမှာ မိသားစုတှနေဲ့အတူတူ ဆှမျးကပျကုသိုလျယူခဲ့တဲ့ ဝတျမှုံရှရေညျ
ပရိသတျအခဈြတျောလေး ဝတျမှုနျရှရေညျကတော့ မွနျမာနိုငျငံက ရုပျရှငျခဈြပရိသတျတိုငျးမသိသူမရှိတဲ့ သရုပျဆောငျမငျးသမီးခြောလေးပါ။ ဖွူဖွူသှယျသှယျနဲ့ခဈြစရာကောငျးသလို သရုပျဆောငျပိုငျနိုငျလှနျးတဲ့မငျးသမီးလေးဖွဈတာကွောငျ့ အကယျဒမီဆုတှကေိုလညျး ဆှတျခူးရရှိထားတဲ့ အနုပညာရှငျတဈဦးပဲဖွဈပါတယျ။ ဝတျမှုံရှရေညျကတော့ လူငယျတဈဦးဖွဈပမေယျ့လညျး ဘာသာတရားကို မမမေ့လြော့သူတဈယောကျဖွဈပွီး အလှူအတနျးနဲ့ပတျသကျရငျလညျး လကျမနှေးဘဲလှူဒါနျးမှုတှပွေုလုပျတတျသူတဈဦးလဲဖွဈပါတယျ။ဒီနမှေ့ာဆိုရငျလညျး ဖခငျဖွဈသူရဲ့မှေးနအေ့လှူအဖွဈ အရှငျဆကေိန်ဒရဲ့ကြောငျးတိုကျမှာ မိသားစုတှနေဲ့အတူတူ ဆှမျးကပျကုသိုလျယးခဲ့တဲ့အပွငျ ဝတ်ထုငှမြေား လှူဒါနျးခဲ့ပါသေးတယျ။ အဆိုပါအလှူလေးကိုတော့ ဝတျမှုံရညျက သူရဲ့အငျစတာဂရမျအကောငျ့ကနပွေီး ပရိသတျတှကေို မြှဝထေားတာပဲဖွဈပါတယျ။ပရိသတျကွီးကလညျး ဝတျမှုံရှရေညျတို့မိသားစုရဲ့ အလှူလေးအတှကျ သာဓုချေါဆိုပေးခဲ့ပါအုံးနျော..။ Source-Wutt Hmone She Yi IG Zawgyi ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့မွေးနေ့အလှူအဖြစ် အရှင်ဆေကိန္ဒရဲ့ကျောင်းတိုက်မှာ မိသားစုတွေနဲ့အတူတူ ဆွမ်းကပ်ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ Read more
မကွာခငျနားဆငျရတော့မယျ့ Ah Boy နဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုတို့ရဲ့ သီခငျြးအသဈလေး
ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုကတော့ Myanmar Idol Season (3)ကနေ ပရိသတျအားပေးမှုကို စတငျရရှိခဲ့တဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ သူမဟာ ပွိုငျပှဲပွီးကတညျးက အနုပညာအလုပျတှကေိုဆကျတိုကျလုပျကိုငျနပွေီး လကျရှိမှာတော့ ပရိသတျအခိုငျအမာရရှိထားတဲ့ အဆိုတျောတဈယောကျတောငျဖွဈနပေါပွီနျော..။ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုရဲ့ သီခငျြးတျောတျောမြားမြားကလညျး ပရိသတျတှအေကွိုကျနဲ့ထပျတူကခြဲ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာလညျး သူမဟာ ခဈြရတဲ့ပရိသတျတှအေတှကျ ခံစားခကျြနဲ့ထပျတူကစြမေယျ့ သီခငျြးအသဈလေးတဈပုဒျကို ပရိသတျတှရှေခေ့ပြွနိုငျအောငျကွိုစားနတေယျလို့သိရပါတယျ။ အဆိုပါသီခငျြးလေးကတော့ “အငှအေ့သကျမြား”လို့အမညျရပွီး နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတဈယောကျဖွဈတဲ့ Ah Boyနဲ့အတူ သီဆိုထားတာဖွဈပါတယျ။ အဆိုပါသီခငျြးအသဈလေးအကွောငျးကိုတော့ “Coming Soon with Kyaw Phyo Tun သီခငျြးနာမညျလေးက ဘာတဲ့တုနျး ??”ဆိုပွီး ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုက Read more